ट्वाईलेट पेपर जति पनि काम नलाग्ने संविधानले देश कसरी चल्छ ? — esagarmatha.com
ट्वाईलेट पेपर जति पनि काम नलाग्ने संविधानले देश कसरी चल्छ ?
मैले पटक पटक भनेको हो– मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मरेको ३ वर्ष भइसेकेको छ । अन्तिम दाहसंस्कार गर्न आफन्तहरू जुटी नसकेकोले ढिलामात्र भएको हो । जजसले ९ वर्ष लगाएर यो संघीय गणतन्त्रसहितको संविधान बनाए तिनले नै ५ वर्षमा च्यातेर धुजाधुजा पारिसके ।
अहिले यो मुलुक बिनासंविधानमा चलेको राणाकाल जस्तै भइसकेको छ । आजसम्म ७ दशकको राजनीतिक प्रयास ३ वर्षमै सोत्तर भयो । अब यसको दाहसंस्कार गरेर नयाँ जीवन जिउन सुरू गरौँ । न यो राजनीतिक ब्यवस्थाले काम गर्न सक्छ, न यो ट्वाईलेट पेपर जति पनि काम नलाग्ने संविधानले देश चल्छ ।
ठण्डा दिमागले विगतका राजनीतिक ब्लण्डरलाई स्विकारेर देशको हावापानी, माटो, संस्कार, संस्कृति र विरासत अनुरूपको राजनीतिक ब्यवस्था पुनः सुरू गरौँ । अहिलेका देश भँडुवा राजनीति र नेताहरू नै मूल समस्या हुन् । यिनको लत्तो लाग्न छाडौँ । नयाँ देशका लागि नयाँ सोच नयाँ विकल्पमा एकजुट भएर अघि बढौँ ।
भारत आफ्नो मुलुकमा झैँ नेपालमा कम्युनिष्ट सोत्तर परेको हेर्न लालायीत छ– खाटी कुरा र अहिलेको मुलुकको विकसित राजनीतिक हलचल त्यसकै परिणाम हो । म यी घटनाक्रमलाई एकदम स्वाभाविक मानिरहेको छु । काल नजिक आएपछि मान्छेको मतिभ्रष्ट हुनेगर्छ ।
गन्तब्य प्रष्ट थियो र छ– गैरकम्युनिष्ट हिन्दु राष्ट्र नेपाल नबनेसम्म यस्ता हलचल भइरहनेछन् । विगतका हलचलहरू कम्यूनिष्टहरूलाई उचालेर, एकिकरण गराएर, सत्ता कब्जा गराएर अनि उत्तानो टाङ लगाएर कम्युनिष्ट सोत्तर पार्ने सुविचारित सुनियोजित भविष्यमूखि क्रियाकलाप थिए, मैले यो कुरा पनि पटक पटक भनिसकेको हुँ । भारतमा विगत ८ वर्षदेखि लगातार बिजेपीको शासन छ, त्यहाँ काँग्रेस र कम्युनिष्ट स्थायी वनबास लागिसकेका छन्, बस यही हो– नेपालको हुनेहुनामी प्रष्ट छ ।
चिनी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ तर दिनमा कती चम्चा खाने ?
के वैतनिक वकील अपराध प्रतिरक्षाका लागि हो ?
डिजिटल सामानले आँखामा पार्ने असर र समाधानका उपाय
सिद्धन्तबिहिनहरूबाट सत्य पराजित भएको छ
महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपाय खोप नै हो
भारतीय दूतावास थप एम्बुलेन्स सहयोग गर्दै गर्नु होला !